Tibba Gidiraa /Jimaata/ – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
April 17, 2020 /in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
Fakkii: Dn. Gabrasillaasee Shittaahun
Guyyaan jimaataa Gooftaan keenya Qorichi keenya guyyaa itti addunyaaf itti fannifame dha. Guyyaan kun guyyaa Fayyinni itti raawwatame waan taateef guyyaa addaa jedhamtee beekamti. Guyyaan kun akka Mana Kiristaanaa keenyaatti moggaasa icciitii adda addaa qabdi.
Qorichi Addunyaa hundaa Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos Addaamii fi ijoollee isaa hundaaf Fannoorratti fannifamee akka biraannaatti yeroo itti dhisamee oole waan ta’eef guyyaa itti yaadannu waan ta’eef ‘Jimaata Fannoo’ jedhamti. Akkuma ‘’Fannoo boodas uffata Isaa carraa itti buusanii adda adda hiratani, achuma taa’aniis eegu turan’’ jedhutti jechuu dha. Maat. 27:35
Gooftaan dura fannoon yakkamaa kan ittiin adaban ture. Nama fannisanii ajjeesuun kan eegale Faarsitti dha. Faarsitti namoonni waaqeffannaan isaanii waaqa Lafaa /ourmuzed/ jedhama. Yakkamaan biyya isaaniitti yoo argamu adabbii isaa lafa irratti kan fudhate yoo ta’e waaqni isaanii akka hin xuroofneef yakkamtoota hundaa fannoorratti fannisu ture. Gochi kunis barsiifannaa ta’ee bulchiinsa Roomaa hundattiyyuu seera baratame ta’e. Sirna Ooriitiittis warreen fannoo irratti fannifamanii adabaman abaaramtoota gurguddoo turan. Gooftaan booda garuu mallattoo adabbii yakkamtootaa fannoo ture sana Gooftaan keenya dhiiga Isaan Qulqulleessee mallattoo araaraa, aasxaa jireenyaa, kan Diyaabiloos ittiin moo’atan, labsiin bilisummaa keenyaa kan ittiin dubbatame ta’e. Du’a Isaatiin jireenya kan itti arganne waan ta’eef Jimaata Gaarii jedhameera.
Gooftaan keenyi Qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos fayyina keenyaaf akkuma Fannoo irratti araara nuuf buuse dhukkuba kana irraas araara nuu buusuun eeyyama Isaa nuuf haa ta’u.
Galatni waaqayyoof !
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2020-04-17 09:05:562020-04-17 09:25:13Tibba Gidiraa /Jimaata/
Beeksisa Gidiraawwan Fannoo